Iyadoo horumarka of technology, kale oo badan oo ay ku farsamooyinka dugsiga jir qabashada shaqo gaar ah ayaa la Magacoowdeen mid ka mid ah kaas oo la qoro iyo sixiddiisa aad files audio. Mararka qaarkood dib, mid u baahan tahay in studio dhigay ilaa qalabka hardware xirfadeed, derbiyada soundproof iyo waxa aan si aad u hesho track ah uruursanayey talooyinka ugu sareysa, waana mid aad u qaadan lahayd farabadan oo ah dhaqanka iyo samir. Laakiin sida beer oo kale, oo duurka ku soo saarka music / tafatirka ayaa sidoo kale lagu soo galisay. Maanta, waxaan qaadi doonaa eegno ugu sareeya 6 track music tifaftirayaasha inoo diyaar ah iyo mid mid waana dhiraandhirin doonaa qaababka ay muujiyaan.
WavePad waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan weli qalab aad u awood badan audio tafatirka. Haddii loo isticmaalo isku daro ilaa garaaca qaar ka mid ah ama si fudud falinjeeerka file maqal ah, WavePad hubiyaa in user helo wax soo saarka xirfadeed ee tayada user ayaa rajeynaya. Qadarka badan oo Casharrada laga heli karaa internetka iyo sidoo kale gargaar ka sahlan loo heli karo oo taageero ka dhigaysa users laylis dareemaan soo dhaweyn iyo caawin kara inay helaan diyaar u ah inay wax ka bedel Cajalado ay hab xirfadaysan in taako aad u gaaban. Waxaa la socon kara Windows iyo OS MAC X.
Faa'iido: Simple iyo fududahay in la isticmaalo interface. Waxay bixisaa waayo-aragnimo siman raaxo u leh bilowga ah iyo dadka isticmaala khibrad labada.
Qasaarooyinka: Audio aan la soo saaro karaa video files. Rating: 5
2. Adobe Xulashada
Adobe Xulashada soo buuxiyey oo la tiro balaadhan oo ah saamaynta in la sameeyo oo dhan mid ka mid Digital Work Station. Waxay bixisaa qalabka tafatirka audio awood badan sida isku mar lagu qoro iyo sixiddiisa badan files audio. Waxa kale oo ay u ogolaataa user ay u soo celiyaan jir xogta audio taas oo ka shaqeynayaan weyn ku dhex jiraan, laakiin waqti isku mid ah waa awood u user in ay si hufan waveforms edit si loo gaaro natiijo la xoojiyay. Adobe Xulashada waa la jaan qaada Windows XP (SP 3) iyo Windows 7 (SP 1). Waxaa sidoo kale taageeray Mac OS X.
Faa'iido: Ka dhig ka saarida buuq ka files audio mid aad u fudud.
Qasaarooyinka: Sida kiiska la WavePad yahay, Adobe Xulashada ma Macdan karaa audio ka video aad u gudbiyo. Rating: 4.5
3. AHV Editor Audio
Haddii aad raadineyso weeyna qalab tafatirka macquul audio la interface la wada qabanayo, AHV Editor Audio waa qalab aad u. Waxaa qoreysa qaar ka mid ah saamaynta audio tayo leh (oo aan inta ugu badan ee Xulashada Adobe inkastoo) oo ay la socdaan qaab ciyaareed awoodaha duubista. Editor audio AHV ma taageeri MAC OS X ama Linux. Waxaa hadda waddaa kaliya ee nidaamka Windows 7, 8, 2003, Vista iyo XP.
Faa'iido:. No habka diyaar u ah dib u soo celinta audio
Qasaarooyinka: Simple iyo fududahay in la isticmaalo la interface saaxiibtinimo. Rating: 4
4. Acoustica Digital Editor Audio
Iyadoo dheer ee lix filtarrada cusub, cajiib ah waqtiga-iskala iyo qalab garoonka-ugana awood u leh inay u qoraan iyo edit badan files audio waqti sameeyo Acoustica Digital taariikhqorihii Audio qalab weyn oo ay leeyihiin. Waxaa ka maqan, si kastaba ha ahaatee, in ay awoodi karto saarista qayladoodana waxaa uun laga heli karaa version joogtada ah ee caymiska.
Faa'iido: Easy in ay isticmaalaan interface la qalab kasta gudahood user gaarin. Waxaa la socon kara Windows OS oo ay ku jiraan oo keliya Windows 7, 8, XP iyo Vista.
Qasaarooyinka: dib u soo celinta Audio ma laga heli karaa Standard version. Rating: 3.5
Interface ayaa isticmaali kartaa upgradation yar laakiin Diamond Goo, in laftiisa waa duubista, tafatirka iyo dib u soo celinta qalab ciyaareed cajiib ah la awoodaha sida tageynaa track ah oo wuxuu galay laba iyo midayn laba kuwan raadkaygay mid. Software waddaa on Windows 7 iyo 8 iyo sidoo kale Windows XP iyo Vista laakiin aan ay taageerayaan MAC.
Faa'iido: Miyuu badan muuqaalada tafatirka audio.
Qasaarooyinka: Incompatibility la MAC, interface dhacsan. Rating: 3
6. Sound oos
Software waxa uu leeyahay xaddi macquul ah saamaynta audio laakiin xadidaya user ay u shaqeeyaan oo kaliya hal file maqal ah waqti. Miyuu awoodda dib u soo celinta audio xoogan, lakiin awood la'aanta in ay ku eegaan natiijada codsiga ah saamayn gaar ah ku xadidayaa wax soo saarka ee Sound hirgaliyo. Waxaa keliya oo la jaan qaada Windows OS; Windows 7, 8, 8.1, XP (SP2 ama ka dambe) iyo Vista (SP 2 ama ka dib).
Faa'iido: ogolaaneysa cajalado jir (floorka, cajalad iwm) in la diiwaan geliyo iyo tayada digital soo jeestay.
Qasaarooyinka:. No multi-track awood tafatirka, adag tahay in la falgali interface, ma Falanqeynta saamayn Rating: 3
> Resource > Music > Top 6 music track / artist editor